पुस २२, २०७३ शनिवार ००:००:०५
सामान्यतः मानिसहरु खाना खाएपछि एक कफ चिया या कफी पिउन मन पराउँछन् । तर, यदि तपाईंलाई राम्रो निद्रा चाहिएको छ भने यो बानी छाड्नुस् । यदि चियाकफी खानुहुन्छ भने समयमा निद्रा नलाग्ने त छ नै, आएको निद्रा पनि खलबलिने सम्भावना हुन्छ । चिया या कफीमा पाइने क्याफिनले निद्रा भ...
यसरी गरौं जाडोमा छालाको स्याहार
पुस १६, २०७३ शनिवार २०:२८:००
जाडो मौसम सुरु भएसँगै अनुहार तथा छालाको सुन्दरता कम हुन थाल्छ । त्यसमा पनि झन् सुक्खा छाला हुनेका लागि यो मौसम शत्रु सरह नै हो । तर, नआत्तिनुहोस्, हामीसँग केही उपयोगी टिप्स छन्, जसले तपाईंको अनुहारमा सुन्दरता निखार्न मद्दत गर्नेछन् । जाडो याममा छालाको रोमछिद्र बन्द ...
यस्तो छ नेपाली महिलाहरुको १०० वर्षको ‘ब्युटी ट्रेन्ड’ (भिडियोसहित)
पुस १६, २०७३ शनिवार १६:३३:२७
विश्वका अन्य मुलुकका महिलाहरु झैँ नेपाली महिलाहरुको श्रृङगार गर्ने तौर तरिका समयअनुसार फेरिँदै गएको छ । फेरिँदो समय र श्रृङगार कलाका कारण उनीहरुको सुन्दरताको रहस्य पनि फरक छ । विगत एक सय वर्षको अवधिमा नेपाली महिलाहरुको श्रृङगार सैलीमा पनि धेरै परिवर्तनहरु ...
मदिराको ह्याङ भए के खाने ?
पुस १६, २०७३ शनिवार १२:१५:२४
पिउन थालेपछि थपेको थप्यै गर्न मन लाग्ने र भोलिपल्ट ह्याङओभर भएपछि ‘धेरै भयो’ भनेर निकै मान्छे पछुताउँछन् । नियमित सेवन गर्न भन्दा कहिलेकाहीँ मात्रै गर्नेलाई भोलिपल्टसम्म ह्याङओभरग्रस्त बनाउँछ । जसले काम समेत प्रभावित पार्छ । यस्तो अवस्था निम्न खानेकुरा खाँदा ह्य...
पुस १४, २०७३ शुक्रवार ०२:४४:००
हाम्रो नियन्त्रणमा नभएका चिजहरू जस्तै उमेर, लिंग र वंशानुगत कारणले हुने समस्यालाई रोक्न सकिँदैन । तर हाम्रो आफ्नै कारणले निम्त्याइएको जोखिम भने नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ । समस्यालाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । अधिकांश हृदयाघात (हर्ट अट्याक) अस्वस्थकर खानपिन र विलासी जीवनशैली...
पुस १४, २०७३ बिहिवार १८:१०:००
आमा बनेपछि शारिरीक सौन्दर्य गुम्छ भन्ने मानसिकता धेरै महिलामा हुन्छ । हुन पनि आमा बनेपछि महिलाको शरीरको स्वरुप स्वभावतः परिवर्तन भएको पाइन्छ । बच्चा जन्माउने र हुर्काउने अभिभाराले महिलालाई आफ्नो शरीरको ख्याल गर्ने फुर्सद समेत हुँदैन । तर, बच्चा जन्मिएपछि आफ्नो शरीर पुरान...
नमिलेका ब्रा लगाउँदा हुने समस्या
पुस १३, २०७३ बिहिवार ०३:५०:१६
अधिकांश महिलाले विचार नै नपु¥याईकन ब्रा किन्ने गर्छन् । ब्राकै कारण शरीरमा असहज भयो भनेर पनि त्यति चासो देखाउँदैनन् वा औषधिउपचार गर्र्र्दैनन् । बरु पीडा सहन्छन् । विज्ञहरुका अनुसार फिटिङ नमिलेको ब्राले महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको हुन्छ । आफूलाई फिट नहुने...
कुन उमेरमा कति घन्टा सुत्ने ?
पुस १३, २०७३ बिहिवार ०३:०८:२३
स्वस्थ सुत्ने विषयको प्रसङ्ग आउँछ, हरेकको दिमागमा एउटा प्रश्न आउँछ । कति घन्टा सुत्दा शरीरलाई उपर्युक्त हुन्छ ? उमेर र विभिन्न व्यक्तिको जीवनशैली अनुसार सुताईमा भर पर्छ । स्लिप हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित अनुसार कुनै पनि व्यक्ति स्वस्थ रहन निम्न समय सुत्नुपर्छः नवजात शिशु (तीन महि...
पुस १३, २०७३ बुधवार २०:२७:२३
पेट दुख्ने, पोल्ने, अम्लपित्त बढ्ने आदि लक्षणयुक्त समस्याको चिकित्सकीय नाम ग्यास्ट्राइटिस हो । यसलाई बोलिचालीमा ग्याष्ट्रिक भनिन्छ । लक्षणहरू छाती र पेटको बीचको खाल्टो वरिपरि दुख्ने पेट पोल्नु भोक हराउनु अम्लपित्त बढ्नु पेट भारी हुनु रिंगटा लाग्नु टाउको दु...
यसरी ढाड दुखेमा तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ
पुस १२, २०७३ मगलवार १४:२५:००
तपार्इंलाई यदि ढाड दुख्ने समस्या छ भने नआत्निुहोस् । तपाईं एक्लै हुनुहुन्न किनकि यो समस्या प्रायः सबै मान्छेले आफ्नो जीवनको कुनै कालखण्डमा एक न एकपटक महसुस गरेकै हुन्छन् । लगभग संसारका ८५ प्रतिशत मान्छेले यो समस्या सानो वा ठूलो रूपमा भोगेकै हुन्छन् । थुप्रै मानिस सकेसम्म घ...
दिसामा आलो रगत जाने समस्या किन हुन्छ ?
पुस ११, २०७३ सोमवार २१:१९:०७
मानिसहरूको भिन्न जीवनशैली र खानपानले गर्दा थुप्रैलाई आजकाल धेरै प्रकारको रोग लाग्ने गर्दछ । यसमध्ये पायल्स (दिसामा आलो रगत जाने) धेरै मानिसको समस्या भएको छ । लाजका कारण धेरै मानिसले पायल्स रोगबारे खुलेर कुरा गर्दैनन् । अझ कतिलाई त पायल्स रोग के हो भन्ने नै थाहा हुँद...
पुस १०, २०७३ आइतवार २३:१९:००
हाम्रो तालुका छालाहरू मर्ने र नयाँ पैदा हुने क्रम निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । यसरी तालुमा छालाहरू मर्ने र नयाँ पैदा हुने क्रम जारी रहँदा टाउकोमा सेता–सेता मसिना फुस्रा दागहरू देखिन थाल्छन् जसलाई हामी चाया भन्ने गर्छौ । मानिसहरूमा बढी चाया प¥यो भने अरूको अगा...
पुस ९, २०७३ आइतवार ०२:४४:००
प्राय मानिस निन्द्रासँग सम्बन्धित समस्याबाट पीडित हुने गरेको पाइन्छ । निन्द्रा नलाग्दा टाउको भारी हने र शरिर आलस्य हुने गर्छ । पर्याप्त नसुत्दा विभिन्न रोग लाग्ने गर्छन् । विज्ञहरुका अनुसार यी कारणले निन्द्रा लाग्दैनः कफीको कुलतः कफीमा हुने क्याफिन नाम गरेको तत्वले निन्द्रा ल...
छोरा जन्माइन् करिनाले
पुस ५, २०७३ मगलवार २३:१०:४६
एजेन्सी– बलिउड अभिनेत्री करिना कपुले छोरा जन्माएकी छिन् । सैफ अलि खानसँग केही वर्ष अगाडी बिबाह गरेकी बलिउड अभिनेत्री करिना कपुर मंगलबार बिहान छोराकी आमा बनेकी हुन् । उनले बिहान करिब ७ः ३० बजे मुम्बईको ब्रिच क्यान्डी हस्पिटलमा छोरालाई जन्म दिएको भारती...
शरीरमा पानी कम हुँदा ११ समस्या
पुस ४, २०७३ सोमवार २०:४१:३०
डिहाइड्रेसन के हो ? जब शरीरमा पानीको मात्रा शरीरबाट निस्किएको पानीको मात्राभन्दा कम हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा डिहाइड्रेसन हुन्छ । हाम्रो शरीरबाट कुनै न कुनै तरिकाबाट पानी बाहिर निस्कन्छ । पिसाब या पसिनाको माध्यमबाट शरीर पानी शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ । १. थ...
तपाईलाई थाहा नभएका चिनीका १० बेफाइदा
पुस ४, २०७३ सोमवार २०:०१:४३
तपार्इंलाई मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयघात आदि समस्या छैन भने त्यो पक्कै पनि सुखद समाचार हो । तर, आफू स्वस्थ छु भन्दैमा कुनै पनि प्रकारको गुलियो खानेकुरा खाने अनुमति छैन है । थप मात्रामा खाएको सुगर (गुलियो मात्रा) स्वास्थ्यका लागि पक्कै पनि हानिकारक छ तर लुकेको सु...
हृदयाघात भइसकेका व्यक्तिले अपनाउनु पर्ने सावधानी
पुस २, २०७३ शनिवार १८:०७:३६
कोरोनरी आर्टरीभित्र रक्तप्रवाह अचानक बन्द भएमा हृदयाघात हुन्छ । समयमै पुनः रक्तप्रवाह नभएमा उक्त कोरोनरी आर्टरीबाट रक्तसञ्चार हुने मुटुको मांसपेशी मरेर जान्छ । यस्तो भएमा असर परेको मुटुको उक्त भागले काम गर्न छाड्छ र मुटु सधैंका लागि कमजोर हुन जान्छ । तर, अत्यन्तै डरलाग्दो ...
पुस २, २०७३ शनिवार १२:२९:००
पौष्टिक दृष्टिकोणले माछा–मासु पोषिलो खाना हो । तर, आवश्यकभन्दा बढी खाएमा यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । स्वस्थ व्यक्तिले पनि कस्तो प्रकारको मासु कति खाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा विचार पु¥याउनुपर्छ । झन् उच्च कोलेस्टेरोल, उच्च रक्तचाप, युरिक एसिड र...
पुस १, २०७३ शुक्रवार २३:१४:००
(१) काम गर्ने राम्रो वातावरण राम्रो काम गर्नका लागि काम गर्ने वातावरण राम्रो हुनुपर्छ । राम्रो वातावरण छैन भने मनमा काम गरौं भन्ने उत्साह हुँदैन । काम गर्ने जोस जाँगर चल्दैन । त्यसकारण अफिसमा काम गर्ने राम्रो वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । टिमवर्क भएकाले सबै स्टाफहरुले क...
तौल घटाउन पिउनुहोस् यी पेय पदार्थ
पुस १, २०७३ शुक्रवार २२:३२:५०
तौल घटाउने प्रमुख उपाय भनेको शारिरीक व्यायाम हो । व्यायामसँगै खानपिनमा पनि ध्यान दिँदा तौल चाँडै घट्न मद्धत पुग्छ । यसबाहेक पोषणबिदहरुका अनुसार तौल घटाउन केही पेय पदार्थ पनि सहायक बन्न सक्छन् । पानीः यो सदाबहार उपयुक्त पेय पदार्थ हो । नियमित पानी पिउँ...